China 4Hz 8Cartridges 12Lines 3D4D HIFU Ihu Ma Isi Na-eweli Hifu 300 Manufacturer and Supplier | Zohonice
4Hz 8Cartridges 12Lines 3D4D HIFU Ihu na Isi Na-eweli Hifu 300
4Hz 8cartridges tinyere 1.5MM / 3.0MM / 4.5MM / 6MM / 8MM / 10MM / 13MM di iche iche omimi prob, ọ nwere ike sere iji ikesiike cheeks anụ ahụ, ipmorve akpụkpọ ekwedo, firming ọdịdị ihu contours, proevent n'olu ịka nká, agba ahịrị, belata ihe puppet ụkpụrụ, Isi Slimming ..
Ebe Mmalite: Beijing China
Brand aha: Zohonice
Asambodo: OA asambodo
Akwụkwọ ikike: 1 ~ 3 afọ
Ngwugwu: Igbe Carton, AluminiumBox, Igbe Osisi
Mbupu: DHL / UPS / TNT / EMS / LARI AKW LKWỌ AKW .KWỌ
Mgbe-Sales Service: Video Nduzi Online, mapụtara akụkụ free
Hokwụ Metgwọ Methond: TT, Western Union, Gram ego, Ebe E Si Nweta ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị
>>> Brief iwebata
4D Hifu Technique enweghị ọbara ọgbụgba, enweghị srgery, enweghị scars na enweghị trauma iji dochie traditioanl ihu mgbochi ịka nká na ahunsenwu mmetụta, Ọ na-enweta 12lines maka 1shooting, site na e guzobere ike okpomọkụ site ụda ebili mmiri, ọ nwere ike prenetrate elu anụ ma rute akwa oyi akwa SMAS facscia, na-akpali usoro mmeghachi nke ya ma kpughee akwara nwa agbọghọ.
Wepụ wrinkles na gburugburu ọkpọiso, anya, ọnụ, wdg.
Eweli na tightening ma cheeks anụahụ.
Kwalite ahụ ekwedo na shaping ngwe.
Kwalite akara agba.
Lubrication nkeonwe nke na-ebute nzuzo na iwepụ nkụ.
Mee ka akpụkpọ ahụ dịkwuo mma, na-eme ka anụ ahụ dị nro ma na-enwu gbaa.
Na-akpali mmetụta nke onwe site na nchịkwa nke ndụ maka mmelite mmeghachi omume.
Mgbasawanye zuru ezu nke ahụike nkeonwe na ibelata ọrịa.
Nkọwa 3D Hifu igwe
Voltaji 110V-130V / 60Hz, 220V-240V / 50Hz
Number nke katrij Ọkọlọtọ: 4.5mm, 3.0mm (Ihu, olu)
Nhọrọ: 1.5mm (Ihu), 6mm (Igbe)
Nhọrọ: 8mm,, 10mm, 13mm, 16mm (ahụ, Ogwe aka, )kwụ)
Cartridge gbaa 20000 gbaa ọ bụla
Ọnọdụ ọrụ Nduzi, Ọkachamara
Ike 0.2J-2.0J (Kemeghi: 0.1J / nzọụkwụ))
Ogologo 1.0-10mm (Kemeghi: 0.5mm / nzọụkwụ)
Ogologo 5.0-25mm (Kemeghi: 1.0mm / nzọụkwụ)
Agba egbe 12 ahịrị
Mbukota size 52x26x43cm
>>> E ji mara
ultrasonic mma ọrụ mgbe nwa oge nta ọzịza onu bụ nnọọ nkịtị.
Rịba ama izu 1 anaghị aga sauna na-ekpo ọkụ, yoga na gburugburu ebe okpomọkụ dị elu mgbe emesịrị
arụ ọrụ, ma akwadoghị ya maka ikpughe.
tupu ọrụ ahụ iji nọgide na-enwe anụ ahụ, akụkụ ntutu dị ọcha, jiri ụbọchị enweghị ike ịme,
ihe ndị dị ugbu a nke ime-eme ka ọ dị ọcha. Biko biko jiri mmiri ọkụ na-asacha ihu gị.
ụbọchị atọ (ọ bụghị karịa okpomọkụ nke mmiri nwere ike ịbụ); rụba nke ahụ ama
replenishment, na-atụ aro a izu dịkarịa ala itinye nkpuchi 3 ugboro.
otu izu anaghị eri soy ihendori pigmenti arọ ihe, mmanya, oseose nri.
Nsonaazụ HIFU na-adịgide adịgide ma ga-aga n'ihu na-emewanye nke nta nke nta ruo ọnwa 3 na-eso ọgwụgwọ ahụ. Dị ka ọgbọ ọ bụla na-egbochi ọgwụgwọ akpụkpọ gị ga-anọgide na-aka nká mana HIFU nwere ike inye gị ume, nke na-eto eto na-achọ anụ ahụ ihe dịka ọnwa 12 ruo 24 mgbe agwọchara gị.
Nke gara aga: 4D HIFU 12 Lines 8 Cartridges Anti Wrinkle Face Lift Skin Tightening Isi Slimming 4DA
Osote: Hifu mmamiri 2in1 mmamiri tightening ọdịdị ihu mbuli 3DHIFU 300B
4D Hifu Usoro 12
8 Cartridges Anti ndọlị
Usoro 12 gbadoro anya na ultrasound hifu ihu na-ebuli ahụ ...
obere Hifu Face Lift na Isi Slimming Machi ...